About Us - Dongguan Amona Hardware Co., Ltd
Rosin King dia fanjakan'ny rosin mpamorona asa fanaovan-gazety sy ny mpamokatra. Izy io dia orinasa, dia orinasa, dia trustable rongony fitrandrahana fitaovana sy ny milina mpamatsy.
Rosin teknolojia King Niorina tamin'ny 2015, dia planina sy mamokatra ny hydraulic, pneumatic sy herinaratra rosin asa fanaovan-gazety, ny marika ihany koa ny King Rosin enail fitaovana, rosin kitapo, Pid Controller sy Cartridge heaters.
Ao amin'ny King Rosin Products, isika miezaka mafy mba hitondra ny tsara indrindra fitrandrahana solventless fitaovana ho an'ny mpanjifa. Tsy manome fanabeazana ny olona manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny traikefa solventless ny fisehoan-javatra, amin'ny alalan'ny ekipa ny solventless manam-pahaizana, ary ny tranonkala rosin -kings .com.
Ny asa fitoriana dia ny hamelatra solventless fitrandrahana maneran-tany amin'ny alalan'ny fitondrana hivarotra vokatra tsara indrindra ao amin'ny kilasy na rosin mila mpanao gazety ao an-trano, na izay tadiavinao any am-kilasy vokatra ara-barotra, dia manana ny fitaovana sy ny fahaizany mba hanatratrarana ny tanjonao.